Torohevitra hoan'izay mandeha any Thailand ~ Journey-Assist - Torohevitra mahasoa
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Torohevitra mahasoa
Torohevitra momba ny fandehanana any Thailand
Rahoviana no fotoana tsara indrindra mankany Thailand (Seasons)
Ahoana ny fomba fitondran-tena ao Thailandy (code of conduct)
Loza any Thailandy
Tahirin-kevitra takiana ao Thailand
Sakafo ao Thailand
Finday sy Internet any Thailand
Ilay vola. Fifanakalozana fifanakalozana vola any Thailand
Fampiasa finday azo ampiasaina any Thailand
Rahoviana no fotoana tsara indrindra mankany Thailandy
Rehefa mikasa ny fitsangatsanganana mankany amin'ity firenena ity ianao dia tokony handray an-tsaina ny mombamomba ny toetrandro eto an-toerana: tafiditra amin'ny karazana tropika izy ary i Thailandy dia manana halavany be, ka dia miovaova ny toetrandro any amin'ireo faritra samihafa.
Ny fotoana mety indrindra amin'ny fizahan-tany dia amin'ny volana novambra ka hatramin'ny martsa. Manomboka ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra, na izany aza, misy ny orana, na izany aza, miovaova amin'ny faritra samihafa any Thailand. Indraindray dia afaka tonga ianao mandritra io vanim-potoana io ary saika tsy mahatratra ny orana.
Amin'ny volana lohataona, tsy azo ihodivirana ny fahatongavana ho eo afovoany sy avaratra atsinanan'i Thailand, satria mandritra ny vanim-potoana io dia misy hafanana tsy takatry ny saina. Matetika mahatratra 40 ny mari-pana, ny afo mipoitra matetika any anaty ala, any an-tanàna ny setroka, ka sarotra aminy ny mifoka rivotra.
Ireo izay manisa tsy eo amoron-dranomasina ihany, fa amin'ny fialan-tsasatra amin'ny fitsangatsanganana koa dia tokony handray an-tsaina fa any atsimo sy afovoan'i Thailand dia zara raha mihena ny mari-pana any amin'ny 25, fa any amin'ny faritra avaratry ny firenena dia mangatsiaka kokoa ny volana novambra ka hatramin'ny feb. Amin'ny alina, mety hisy fihenan'ny mari-pana hatramin'ny +10. Noho izany antony izany dia tokony handray ireo akanjo mafana mafana. Na izany aza dia tokony ho raisina an-tànana io fiasa io rehefa misafidy trano. Na izany aza, na izany na tsy izany dia nasaina haka zava-na mafana farafaharatsiny, satria tena mahafinaritra amin'ny fiara fitateram-bahoaka, toeram-pivarotana ary amin'ny fivarotana maro, satria miasa amin'ny toerana rehetra ny zana rivotra.
Ny volana tsara indrindra mba hipetrahana any Thailandy dia ny volana ririnina. Noho izany, manapa-kevitra ny ho tonga amin'ity firenena ity amin'ny ririnina ianao dia tokony hikarakara tapakila mialoha ianao, tsara indrindra - na dia roa volana talohan'ny dia nokasaina hatao.
Vakio bebe kokoa momba ny toetrandro sy toetrandro any Thailandy (ankehitriny sy isam-bolana). Tsindrio eto!
Ahoana ny fomba fitondran-tena any Thailandy
Any Thailandy, heverina ho tsy mendrika ny hitenenana mafy sy hanenon-tena mafy, indrindra amin'ny toerana am-bahoaka. Na izany aza eto dia misy ny fanehoam-pitiavana fitiavana eny an-dalambe.
Amin'ny ankapobeny, ny mponina Thailandey dia asiana toetra tony sy voafehy, fihetsika tsy ekena ho an'ny famoretana sy ahiahy. Noho izany antony izany, na dia misy aza ny fifanoherana dia aleo mitoetra milamina sy manaja ny mpifaninana.
Tsy ekena ihany koa ny mikasika ny loha sy ny soroka olon-kafa. Izany dia hita ho fihetsika tsy dia mahasoa loatra, satria ny mponin'i Thailand no mihevitra ny loha ho masina sy tsy misy fotony.
Alohan'ny hidiranao amin'ny tempoly na ao anaty trano iray hamangiana olona, ​​dia tsy maintsy esorinao ny kiraronao. Ankoatr'izany, any amin'ny tempoly (na toerana iray hafa azon'ny mpitsidika azy), ny fitafiana tsy tokony hampahafantarinao ny tongotrao sy ny sorokao. Ity dia mihatra amin'ny olona mitovy fananahana. Outfits manana fantsom-bolo lalina dia tsy ekena amin'ny toerana masina.
Ny ankamaroan'ny mponin'ny Thai dia bodista ara-pivavahana lalina, noho izany, mifandraika amin'ny fahatahorana sy ny fanajana ny Buddha sy ny sariny rehetra. Ny fihetsika tsy manaja olona mifandraika amin'ny sarivongany sy ny sariny dia mety miteraka fihetsika mamaivay eo amin'izy ireo. Tsy azonao atao ny maneho tsy fanajana kely ny sary sokitra Buddha, na dia kely indrindra aza. Ohatra, tsy tokony hiakatra tsangambato ianao amin'ny sary ho fitehirizana. Na izany aza, mitovy amin'ny fianakavian'i Royal Thai: misy fihetsika tsy manaja ny sarin'izy ireo (anisan'izany ny volafotsy) dia hiteraka fihetsika ratsy aminao.
Izay tsy mety sy lozabe amin'ny biby dia tsy azo ekena tanteraka ao Thailand. Ny Bodista dia mihevitra ny fiainana masina rehetra, noho izany dia mitsabo tsara ny biby rehetra izy.
Vakio bebe kokoa momba ny kolontsaina sy filozofia any Thailand. Tsindrio eto!
Tokony hitandrina ianao rehefa manao olom-pantatra vaovao, indrindra rehefa mitranga amin'ny trano fisotroana kafe, bar, nightclub. Mety hisy loza mety hianjera noho ny fisolokiana na ny halatra nataon'ny Vietnamianina na Kambôdziana, izay mety hampianjera ny olona Thailandey.
Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny any Thailand no nanjaka. Betsaka ny bara fizaram-potoana sy disko, sakafo haingana, akoho amin'ny fangaro mangatsiaka, zava-mahadomelina malefaka sy kojakoja hafa. Noho izany, mpizahatany maro no manao "amin'ny fomba matotra rehetra". Nasaina tsy hitsidika toerana mampiahiahy, satria indraindray any amin'ny toerana toy izany ny asan'ny polisy.
Na izany aza, ny mpizahatany matetika dia voavela eto, indrindra, ny fampiasana zava-mahadomelina. Araka ny lalàna, noho ny fandikan-dalàna, mazava ho azy, afaka manilika, manala sy miditra akaiky any Thailandy ho an'ny hoavy izy ireo, saingy amin'ny ankamaroan'ny tranga toy izany, dia voavaha mora foana ny zava-drehetra. "Misaotra an'ireo mpizahatany noho ny fandeferana ataon'ny polisy, nambara tao amin'ny den.znak."
Misy polisy mpizahatany manokana any Thailand. Mahay miteny anglisy daholo ireo mpiasa ao aminy. Ary any amin'ny polisy mpizahatany no tsara kokoa raha mifandray amin'ny mpizahatany raha misy olana.
Telefaona mahasoa any Thailandy (serivisy vonjy maika sy ny maro hafa) Tsindrio eto!
Aza adino ny mampiasa tara-masoandro any Thailand. Tena mety indrindra ho an'ireo tonga voalohany indrindra io. Mafy ny taniny eto. Afaka mahazo loko miloko tsara tarehy ianao miaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka ireo vokatra manokana.
Raha ilaina fotsiny:
Momba ny fanafody any Thailandy, ny hopitaly, ny fivarotam-panafody sy ny maro hafa. Tsindrio eto!
Ahoana ny fanomezana fanampiana voalohany. Tsindrio eto!
Kitapo fanampiana voalohany. Tsindrio eto!
Tsy maintsy manome antoka anao ny tenanao ianao alohan'ny hanidina any Thailand (toy ny any amin'ny firenena Azia Atsinanana hafa). Na izany aza, misy tokoa ny risika ara-pitsaboana sasany. Indrindra indrindra, ny sakafo nahandro Thai, tsy mahazatra ho antsika, dia mety hiteraka olana amin'ny taovam-pandevonan-kanina. Ny toe-pahadiovana any Thailand dia mbola ambanin'ny ambaratonga Eropeana. Feno bibikely sy reptilista miavaka ilay firenena, ary fahita eto koa ny aretina voan'ny aretina. Amin'izao fomba izao dia saika tsy misy voan'ny tazomoka eto, fa ny loza ateraky ny otrikaretina, ohatra, avy amin'ny tazo Dengue (mety ho tratry ny moka moka izy io) dia lavitra ny aotra.
Tokony hanao kopia mialoha ny pasipaoronao koa ianao. Hasaina manofa fiara na bisikileta izy ireo. Toy ny fitsipika, ny fahazoan-dàlana amin'ny mpamily tsy mitaky fahazoan-dàlana amin'ny fanofana fiara, fa raha mijanona ny polisy ianao rehefa mitondra fiara tsy misy fahazoan-dàlana dia azonao atao, dia mahazo onitra.
Mampiavaka ny fifamoivoizana (SDA) any Thailandy
Ny fanofa-fiara ao Thailand
Manasa mofomamy ny Thai. Ho an'ny vatan'olombelona, ​​izay tsy zatra amin'ny lovia toy izany, indraindray dia tsy miteraka. Mba hialana amin'ny olana toy izany dia tokony hampahafantatra avy hatrany amin'ny mpandroso sakafo ianao ao amin'ny kafe fa mila ilay lovia fery ianao (tsy misy zava-manitra). Avy eo dia tokony hitondra ho anao izy ireo raha tsy feno ny spiciness, avy eo amin'ny toe-javatra rehetra, tsy tena lovia manitra mampatahotra. Marihina fa ny fisotroana pungency Thai miaraka amin'ny rano dia saika tsy misy dikany.
Voankazo any Thailand. Prices sy vanim-potoana
Amin'ny maha-fitsipika azy, ny sakafo manitra ao amin'ny kafe dia miaraka amin'ny ahitra manokana eo amin'ny lovia, aorian'ny fandinihana ny fihenan'ny vokatry ny fahamaizana.
Antsipirihany momba ny sakafo ao Thailand. Tsindrio eto!
Ny topimaso tanteraka momba ny voankazo any Thailand. Tsindrio eto!
Serasera finday any Thailandy
Ny karatra SIM any Thailand dia amidy, any amin'ny tsenambarotra rehetra, ao anatin'izany ny 7/11 malaza sy ny gadra Family Mart. Ny fividianana karatra Thai dia safidy mahasoa kokoa raha ampitahaina amin'ny fampifandraisana an-tsokosoko amin'ireo mpampiasa finday ao amin'ny firenenao. Amin'ny alàlan'ny tolotra dia misy ny mety handefasana karatra SIM Thai alohan'ny hahatongavany amin'ity firenena ity. Ny tranonkala sasantsasany dia manolotra karatra fiomanana mialoha ny motera finday any Thailand tahaka ny True sy DTAC. Ilaina ihany ny mametraka baiko, aorian'izay dia miandry anao ny courier amin'ny fotoana voatondro ao amin'ny seranam-piaramanidina. Ny vidin'ny fandefasana dia ambany. Ny fampiatoana kaonty finday amin'ny alàlan'ny mpikirakira finday Thai ihany koa dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana finday AliExpress.
Vakio bebe kokoa momba ny fifandraisana finday sy Internet any Thailand
Afaka mitondra soa aman-tsara miaraka aminao ianao amin'izay. Miova tsy misy olana izany eo amin'ny banky sy ny fifanakalozana. Fa tena mahasoa indrindra, amin'ny maha-fitsipika, ny haka Dolara na Euros. Ny tahan'ny fifanakalozana dia ampy araka izay azo atao (oharina amin'ny vola hafa).
Marihina fa ny fifanakalozana dia miovaova arakaraka ny ataon'ilay volavolan-dalàna. Izany hoe, ny lehibe kokoa ny anaram-piangonana, no mahasoa kokoa ny fifanakalozana fifanakalozana. (io no mampiavaka ny firenena maro any Azia Atsimo Atsinanana).
Raha vola dolara no resahantsika, dia misy fitsipi-pifehezana telo:
Ny banky dia manamarika ny tahan'ny $ 50 sy 100 $ - 31 baht ho an'ny 1 $ (eo ho eo)
Banknotes $ 5 - $ 20 - ny tahan'ny fifanakalozana 30,5 baht ho an'ny $ 1 (am-baravarana)
Banknotes $ 1 sy $ 2 - làlana 30,1 baht ho an'ny $ 1 (am-baravarana)
Ary midika izany fa raha mifanakalo $ 100 amin'ny volavolan-dalàna kely ianao ($ 1-2), dia mety ho very hatramin'ny $ 3, raha ampitahaina amin'ny fifanakalozana ny volavolan-dalàna 100 dolara.
Tsy dia ny vola tsy fantatra eto amin'izao tontolo izao dia azo ovaina any Thailand, fa tena tsy mahasoa. Miaraka amin'ny fifanakalozana toy izany, misy fiovam-po indroa, ary ho fanampin'izay ny taham-pahafahana dia tsy mahomby.
Misy antsipiriany momba ny fifanakalozana fifanakalozana vola, ny fampiasana ny carte de crédit any Thailand, ary koa ny kajy fifanakalozana mpampindram-bola.
Tadiavo fampiharana finday any Thailand
Tonga tany Thailand avy any Japon tamin'ny taona 2012 ity mpitondra hafatra ity. Ankehitriny, ny isan'ireo mpampiasa ny rindranasa dia eo amin'ny 33 tapitrisa eo ho eo, saika ny antsasaky ny mponin'i Thailand!
Ho fanampin'ny fakany japoney, ny antony mahatonga ny lazan'ny tsipika dia toe-tsarimihetsika mahafinaritra an'ny sary romotra izay ahafahanao maneho ny fihetseham-ponao. Ho fanampin'ny chat, manana ny takelakao miaraka amin'ny fotoam-pivoriana ianao, afaka mamorona vondrona ianao ary misoratra anarana amin'ny kaonty imasom-bahoaka. Vao haingana, ny serivisy e-vola Line Pay dia natomboka - amidy ny karatra recharge any Tesco Lotus sy ny toerana hafa, ary mitombo ny isan'ireo fivarotana mandoa ny kaonty toy izany. Ny interlocutors dia ampiana ho azy avy hatrany amin'ny bokin'ny findainao, azo atao koa ny mikaroka amin'ny tsipika tokana tokana na manisy kaody QR. Azo atao koa ny dikan-takelaka desktop, izay azo apetraka miaraka amin'ny finday.
Serivisy famandrihana tapakila 12GO
Orinasa eo amin'ny zato eo ho eo no nampidirina tao amin'ny angon-drakitra fandaharan'asa, ary ny mpanome antoka dia manome antoka fa ny fampahalalana hatrany. Ampidiro fotsiny ny fiainganana sy ny toerana itodiana amin'ny teny anglisy - ary ho hitanao ny fandaharam-potoana amin'ny làlana. Manaraka eo amin'ny fotoana hialana dia hisy bokotra maintso misy vidiny raha afaka mandoa ny tapakila avy hatrany ianao (PayPal, carte de crédit, vola amin'ny 7/11), na manga rehefa mila mividy tapakila eo amin'ny biraon'ny boaty ianao. Ny vaomiera aggregator dia efa tafiditra ao amin'ny vidin'ny tapakila na ho iray dolara iray. Rehefa manindry ilay bokotra mividy ianao dia hanana ora roa handoa.
Hafatra iray hafa ho an'ny mampiaraka sy ny fifandraisana. Mampiseho ireo mpampiasa mavitrika rehetra ao anaty radios iray manokana anao. Saika tsy misy tarehy eropeana iray - eritrereto fa niditra tamin'ny klioba Thailandey ianao. Raha mifandrindra, azonao atao ny mampiasa graffiti voasintona, stickers, hafatra izay nanjavona avy hatrany aorian'ny famakiana, ary koa ny chats vondrona. Misy ny mety hiantsoana ny hafatra sy antso an-peo.
Noforonin'i Thais dia boky torolàlana misy fifandraisana amin'ny fiteny Thai sy anglisy, manintona ny votoatin'ny tranonkala klaiklai.com.
Hanampy anao hahita ny tobin-dàlana akaiky indrindra, biraon'ny paositra, fijanonana fitateram-bahoaka, tsenan'ny hotely, hotely, banky sy ny maro hafa ilaina, dia manome lalana ny sarin'izy ireo amin'ny sarintany.
Misy zavatra mihoatra ny tapitrisa ao amin'ny tranokala, izay mahatonga ny fampiharana azy ho iray tena ilaina indrindra amin'ny orientingering.
Tsy tsiambaratelo ny marobe fa mandositra irery any Thailandy. Ity misy serivisy lehibe iray ahafahanao mahita vady eny amin'ny radius iray hafa. Efa nisy nanomboka ny 2007 ny fampiharana, ary nandritra io fotoana io dia an-tapitrisany no lasa mpampiasa azy. Avy amin'ny fisakaizana mankany amin'ny fifankatiavana - Faly foana ny Skout hihaona amin'ny olona vaovao. Azonao atao ny mametraka toeranao na aiza na aiza alehanao - mba "hanamboarana tetezana" mialoha.
Azo atao amin'ny manodidina ny chat - tsy misy «match» ilaina. Misy ny mety handefasana sary sy feon-peo: mendrika ny mpitondra hafatra ao amin'ny fandaharana.
Sarintany Sari-tany Galileo
Koa satria ny Internet tsy azo idirana matetika amin'ny vahiny tonga any Thailand, dia tena ilaina ny manana sarintany an-tserasera an-tànana, alaina amin'ny telefaona. Azonao atao ny mampiasa ny safidy avy amin'ny Google, saingy ny mpikatroka Galileo dia milaza fa ny fangatahan'izy ireo amin'ny iPhone no haingam-pandeha. Izany dia tanteraka noho ny endrika vector endrika sary, ary koa ny fampiasana tricks optimization. Miasa amin'ny karatra dia tena fahafinaretana!
Izy io dia manohana amin'ny fikarohana ivelany ho an'ireo zavatra amin'ny anarany sy ny fandraisam-peo ny làlan'ny GPS amin'ny fotoana tena izy. Azo atao tsara ny manafatra teboka ary misy lalana amin'ny endrika KML sy GPX. Galileo dia noforonin'ireo mpamorona Rosiana - mpitsangantsangana famindram-po. Ity angamba no antony nahatonga ny fangatahana lasa mora sy mahira-tsaina.
Avy any Thailand ka hatrany Malaysia
Hanampy torohevitra ho an'ireo maniry hamonjy aho. Aza mihinana sakafo Rosiana any. Matetika no lafo kokoa noho ny ao an-Tanindrazana, na dia mazava ho azy fa tsy izy io no mahazatra anao.
Ary mbola any amin'ny firenena hafa ianao, noho izany dia manoro hevitra aho hanandrana ny sakafo eo an-toerana. Tena tsara, indrindra ny vary sy ny hazan-dranomasina.
Ny zava-manitra (fofona) ... tsara ao izy ireo amin'ny maha-antibay ny bakteria azy, tsara tsara ny mampiasa azy ireo (any amin'ny tany mafana) raha tsy misy olana amin'ny kibo. Eny, raha tena maranitra, dia manontany foana ianao raha mila spicy.
Ary raha maka sakafo amin'ny lanonana ianao na any amin'ny sekoly ambony dia ny zava-manitra dia ao anaty kitapo kely tsy mihetsika, ary ny tenanao dia afaka manampy azy ireo amin'ny hanina araka izay tianao.
Sakafo ao Thailand, toy ny saika manerana an'i Azia, dia tena matsiro sy nahafa-po 🙂.